China 30inch Steel Charcoal Fire Pit Manufacture and Factory | Chuliuxang
[Omelele] Umgodi womlilo wangaphandle wenziwa kwi-mesh yensimbi kunye nesakhelo esiqinileyo, esihlala ixesha elide.
[Iinjongo ezininzi] Uyilo oluqinileyo olunepateni ekhethekileyo lufanelekile ukufudumala, i-BBQ, i-ice bucket.
[Yila] Isikweri sokuhombisa indawo yomlilo ineempawu ezikhangayo zoyilo lomgca we-faux wamatye.
[Ukhuseleko] Isivalo somnatha sivala umlilo, sithintela iintlantsi okanye ubutyobo obubhabhayo.
[Indibano]Kulula ukuyifaka. Isigqubuthelo SIMAHLA sokugcina lo mgodi wentsimbi ucocekile kwaye unqande umhlwa.
Ngaba unokusebenzisa amalahle kumngxuma womlilo?
Ukuba nomngxuma womlilo ongasemva kwendlu yindlela epholileyo yokuhlangana kunye nosapho okanye nabahlobo. Imingxuma yomlilo inokuba yiyo nantoni na ukusuka kumngxuma owembiwe emhlabeni ukuya kwisixhobo esomeleleyo esenziwe ngentsimbi, isitena, okanye enye into eqinileyo. Kodwa, abasebenzisi bahlala bethanda ukuzama into enokutshiswa emhadini wabo, kwaye abaninzi bayazibuza ngamalahle’ s ukusebenza kwenye.
Ewe, ungasebenzisa amalahle kwindawo yomlilo. Amalahle yinkuni leyo’s itshiswe kwindawo eneoksijini, kodwa isenako ukutshisa ngakumbi, idale ubushushu, kwaye lukhetho olukhulu ukuba uceba ukupheka kwindawo yakho yomlilo.
Kukho ezinye iindlela zokubasa indawo yakho yomlilo, kuxhomekeke kumgodi onawo. Vumela’s jonga iindlela ezahlukeneyo zokubasa enye.
Ukubasa uMgqomo woMlilo ngamalahle
Amalahle enziwa ngamaplanga avuthayo aneoksijini encinci ngeenxa zonke. Umlilo abathandi bomgodi bayakonwabela ukusebenzisa le nto ngezi zizathu zilandelayo:
Ifumaneka lula kwaye ithengwe kuyo nayiphi na ivenkile.
Igcina ubushushu obuphezulu
Akukho vumba lomsi likhutshwayo, ngoko ke ukuba lisetyenziselwa ukugcoba, incasa yomsi iphumelele’t ukongamela ukutya.
Ukukhetha uhlobo oluLungileyo lwamalahle
Kukho iintlobo ezahlukeneyo zamalahle akhoyo.
Amalahle acinezelweyo. Eli lahle lilo eliqhelekileyo onokuthi ulithenge kuyo nayiphi na ivenkile yokutya. Badibanisa iinkuni ezincinci kunye nezinye izinto ezifana nembewu, kwaye ukongezwa kwezibophelelo zeekhemikhali kunye nezitshizi zinceda ukuba zivutha ngokukhawuleza kwaye zihlale zivutha ixesha elide.
Amalahle aciniweyo ngeenkuni ezitshayayo. Iinkuni zokutshaya, njenge-hickory, zifakwe kwi-charcoal ukuze zinike incasa yokutshaya xa upheka. Zombini ezi ntlobo zamalahle acoliweyo ane‘ukukhanya okuhambelanayo’ inguqulelo.
Amalahle enziwe ngamaplanga aqinileyo enziwe mnyama kwaye atshiswe. Ubushushu buqatsele kwaye ukungabi nakhemikhali kwenza ukutya kube nencasa engcono.
Izinto eziluncedo zokuba noMgobho wamalahle
Kutheni kufuneka ufumane indawo yomlilo? I-Aesthetics ayikuphela kwenzuzo yokuba nayo.
Ngaphambili: Umgodi womlilo wepropane wangaphandle
Okulandelayo: Ixabiso loMzi-mveliso wase China litshiphu i-CE yeglasi ephathwayo yeglasi 3 isitshisi segesi yesitovu seTheyibhile eToptops yegesi
Umngxuma woMlilo weGesi yeDiy
umgodi womlilo wegadi
Irhasi kunye neWood Fire Pit
umgodi womlilo wangaphandle
I-Patio yoMlilo weGesi yoMlilo
Iigrill zeCeramic komado
Ibarbecue yaseGadini 24-intshi yomsi wegrill
Ukusonga i-Charcoal grill kunye ne-smart grills
Ukupheka kwangaphandle kwe-charcoal grill
18 Intshi komado grill
Iigrill zebarbecue zangaphandle